U-Anant Singh – The Ulwazi Programme
U-Anant Singh wazalwa ngomhlaka 29 Meyi 1956 eThekwini, waziwa njengomkhiqizi wamafilimu ovelele waseNingizimu Afrika, njengoba esekhiqize amafilimu angaphezu kuka-80 kusukela ngo-1984. Ungumkhiqizi wamafilimu amaningi alwa nobandlululo enziwa eNingizimu Afrika, kufaka phakathi i- “Place of Weeping,” Sarafina! ” nokuthi “Cry, the Beloved Country”.
Wathola amalungelo efilimu ku- “Cry the Beloved Country” ngo-1991 kodwa wabambezeleka ukukhiqizwa kwaze kwaba yilapho iNingizimu Afrika ithola inkululeko.
Wanikezwa amalungelo efilimu ukukhiqiza ifilimu ngempilo kaNelson Mandela, i-“Long Walk To Freedom”. U-Anant Singh ubuye wakhiqiza ama-documentary amaningi abalulekile, afaka phakathi i-Countdown to Freedom, mayelana nokhetho lokuqala lwentando yeningi eNingizimu Afrika, i-Prisoners of Hope, mayelana nokuhlangana kabusha eRobben Island kweziboshwa eziwu-1250 zezombusazwe ezaziholwa nguNelson Mandela.
U-Singh njengamanje uyi-CEO futhi ungusihlalo we-Videovision Entertainment Group, usihlalo we-Cape Town Film Studios, isikhungo sesitudiyo esisezingeni eliphezulu eKapa, ungusihlalo ngokubambisana nomsakazo we-Cape Town Metropolitan, ​​i-Smile 90.4FM futhi usebenza ebhodini le-Victor Daitz Foundation.